Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 2 - Blockchain News
Cryptotrader Peter McCormack nandinika ny toe-javatra eo amin'ny tsena crypto ka tonga teo amin'ny famaranana fa maro mpankafy crypto vaovao tonga any an-tsena amin'ny tanteraka tokoa fa izy ireo dia ho afaka ny hanan-karena haingana. Araka ny McCormack, izany dia mitarika tsy ho diso fanantenana, fa koa ny fahaverezan'ny vola haingana.
mazava ho, rehefa eny an-tsena dia miaina ny vanim-potoana eny maka-, maro ny mpampiasa vola vaovao tonga izany, manantena ny hahazo tombony mora. Ary, dia manoratra momba izany ao amin'ny vaovao rehetra, ary ireo izay mitantana ny hahazo tsara karama, milaza momba ny tantaram-pahombiazana. Fa manjary miboiboika teraka: dia nitranga tamin'ny teboka-fr fefy, ary toy izany koa teo amin'ny 2008 trano fefy.
Na izany aza, crypto tsena tsy miasa eo ambany avy hatrany ny tetika ny vola. Izany dia tombantombana tsena, izay mpilalao sasany dia afaka hanan-karena haingana. Maro haingana ny fampiasam-bola intsony. Crypto tsena, toy ny hafa tsena, dia arahana, izay midika fa rehefa avy ny fe-potoana fitomboana, ny Fahalavoana dia ho voatery tonga fotoana. Araka izay nitranga tany 2013: amin'ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny ny cryptology, izany fotoana izany dia mijery toy ny fotoana ny fitomboana kely, Avy eo nisy tsy misy dikany indray mitete.
Na izany aza, raha ny tena izy, tamin'ny Novambra 2013 ny capitalization ny crypto tsena Nitombo haingana manohitra ny resahana ny fahatongavan'ny mpilalao vaovao, izay vola in bitcoin – ny revolisionera vola vaovao ny hoavy. Noho izany, amin'ny Desambra 4, 2013 ny tarehimarika tonga ny voalohany indrindra amin'ny $ 15.7 lavitrisa. Ary amin'ny Desambra 19, capitalization nianjera mafy efa ho roa – ny $ 6.9 lavitrisa. Crypto tsena naka mihoatra ny roa taona ho sitrana sy hahatratra lasa mifaly.
Izany toe-javatra dia mety mamerina, na dia amin'izao andro izao aza ny tsena ho an'ny crypto vola dia tena samy hafa amin'ny zavatra tao amin'ny 2013: mpilalao manana fanazavana bebe kokoa momba izany, ary ny tontolo iainana mivoatra haingana dia haingana, dia nahita ny fampiasana vaovao. Na dia izany aza, izany dia tombantombana tsena izay afaka hirodana na oviana na fotoana. Mazava ho azy, misy ohatra mikasika ny fomba ahafahanao mahazo manan-karena mafy eo amboniny, na izany aza, ny vintana ny fampiasam-bola rehetra very noho ny zara raha efa voaomana paikady fampiasam-bola ireo imbetsaka ambony.
Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 1 Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 3
Previous Post:Fahadisoana ny Сrypto mpamatsy vola. Error 1
Next Post:Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 3